Maxkamad kutaala Koonfur Afrika oo xabsi 50-sano ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed +DAAWO+MUQAALKA | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Maxkamad kutaala Koonfur Afrika oo xabsi 50-sano ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed +DAAWO+MUQAALKA
Maxkamad kutaala Koonfur Afrika oo xabsi 50-sano ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed +DAAWO+MUQAALKA
Maxkamad kutaala Dalka Koonfur Afrika ayaa xabsi 50-sano ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu helay fal dambiyeed ah in uu si kas ah Magaalada Johanesburg ugu dilay Muwaadin kale oo Soomaaliyeed.
Maxkamada oo kutaala Magaalada Johanesburg ayaa 6-dii bishan waxa ay xabsi 50-sano ah ku riday Yoonis Yuusuf Maxamed , oo lagu helay in dil bareer ah 3-dii bishan December uu u geestay Muwaadin kale Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ilyaas Maxamed C/maalik.
Falkan dilka ah ayaa ka dhacay Xaafada Soomaalidu ka degto Johanesburg ee Mayfir, waxa uuna dilka yimid kadib markii labadan nin ay ku murmeen goob lagu ciyaaro Bilyaardiga sida uu Warbaahinta u sheegay Afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacabao Xoli Mbele .
Afhayeenka ayaa sheegay in gacan weyn ka geesteen dadka deegaanka uu dilku ka dhacay sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiiglaha oo baxsaday marka uu dilku geestay, waxaa sidoo kale la helay bistooladii uu diilka ku fuliyay.
Dalka Koonfur Afrika ay kunool yihiin Soomaali aad u badan ayaa xiliyada qaar waxaa ka dhaca dilal ay Soomaalida dhaxdooda isku geestaan, waxaana marar badan Magaalooyin kuyaala dalkaasi ka dhacay Dilal dhac ay Soomaalida dhaxdooda isku geesteen.
Title: Maxkamad kutaala Koonfur Afrika oo xabsi 50-sano ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed +DAAWO+MUQAALKA